Tafakatra 21 ireo ahina nikasa hamono ny filoha: miaramila sy zandary 12 ahitana jeneraly dimy voasambotra | NewsMada
Mivoatra ny toe-draharaha. Nanao fanambarana faharoa manoloana ny raharaha fikasana hamono mpitondra fanjakana ambony “Apollo 21” ny eo anivon’ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambony (PGCA), Razafiarivony Berthine, omaly tetsy Anosy. Maromaro ireo ahina ho voasaringotra amin’izany ka maro anisa ireo miaramila sy zandary.
Miisa 21 ireo voasambotra sy nohenoina, hatramin’izao, araka ny nambarany momba ity raharaha ity ka ahitana miaramila sy zandary 12 izany. Mitsinjara ho jeneraly ny dimy amin’izany raha kapiteny ny roa. Manamboninahitra lefitra kosa ny dimy hafa ary miaramila sy zandary efa nisotro ronono ny efatra ka ahitana teratany malagasy sy vahiny. Miisa dimy kosa ireo sivily ahina ho tafidtra amin’izao raharaha izao.
Paikady sy ny sorabola…
Na izany aza, mbola ao anatin’ny famotorana sy anaovana andrimaso manokana kosa ny 14 amin’izy rehetra ireo.
Etsy andaniny, nogiazana kosa ny vola 900 tapitrisa Ar sy ny fitaovam-piadiana, toy ny basy “Fusil à pompe calibre 12”, miampy bala enina sy ny fiara roa. Sarona nandritra ny fisavana nataon’ny mpitandro filaminana tamin’ilay teratany frantsay sy Malagasy mizaka zom-pirenena frantsay avokoa ireo.
Nambaran’ity tompon’andraikitra ambony ity koa fa ny fisavana ny telefaonina sy ny fitaovana informatika no nahitana ny SMS sy ny mailaka nifanaovana. “Hita tamin’ny antontan-taratasy ny paikady sy ny sorabola hanatanterahana ny asa ratsy. Nokasaina hovonoina ireo olona ambony ara-politika miisa dimy. Anisan’izany ny filoham-pirenena”, hoy izy.
Heverina ho toy ny tsy meloka…
Nahitsy ny kosa anefa ny tenany nilaza fa mbola mitohy ny fanadihadiana ka mbola heverina ho toy ny tsy meloka ireo rehetra voalaza ireo, araka ny nambarany.
Tsiahivina fa ny 21 jolay teo, izany hoe herinandro mahery izao, ny fanambarana voalohany nataon’ny eo anivon’ny PGCA, nampahafantatra ny vaovao momba ity “Apollo 21” ity.